Mmepe mmadụ bụ isi ihe ga-enyere ndị njem njem njem na Naijiria aka
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Mmepe mmadụ bụ isi ihe ga-enyere ndị njem njem njem na Naijiria aka
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Hospitallọ ọrụ ile ọbịa na njem nleta nke Nigeria na-eji nwayọ nwayọ na-ezute ọchịchọ nke ndị metụtara ya na ụlọ ọrụ ahụ.
Hospitallọ ọrụ Ile ọbịa na njem nleta nke Naịjirịa na - eji nwayọ nwayọ iji zute agụụ nke ndị metụtara ya na ụlọ ọrụ ahụ na ụlọ ọrụ ahụ na - ewere ọnọdụ ya dị ka ikike nke na - achọ ka mba ahụ gbanwee site na akụnụba akụ na ụba bụ mmanụ dabere na akụ na ụba dịgasị iche iche. .
Oriakụ Chika Balogun, Director General nke National Institute for Hospitality and Tourism [NIHOTOUR] kwuru okwu nso nso a na Lucky Onoriode George; kwuru okwu na mbụ na okwu ndị ọzọ dị iche iche na-enye nsogbu na ụlọ ọrụ ile ọbịa na njem nleta nke mba ahụ; na-ekwusi ike na ike ga-adị mkpa iji rụọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ga-enwerịrị ike, ihe ọmụma dabere na teknụzụ.
Njem nleta na akụnụba mba
N'ụwa niile, njem, n'ezie Inclusive Tourism na-kwetara ka otu n'ime ndị kasị onyinye na Gross Domestic Product [GDP] nke ọtụtụ mba. Ndi ochichi ugbua nwere, na ikwuputa ihe njem di nkpa na iweghari ma na akwalite onodu aku na uba, hoputara iji kwalite ulo oru ndi njem dika otu uzo iji gbasaa onodu aku na uba iji nweta uto ma meziwanye GDP nke obodo. Nke a bụ ihe kpatara gọọmentị ji arụsi ọrụ ike iji melite azụmaahịa nke njem nleta na usoro ọrụ ya niile site na itinye ebe dị mkpa maka ụlọ ọrụ iji nwee ọganihu. Otu n'ime ndị nkwado dị otú ahụ bụ iwulite ikike.
Ndị njem nleta na-abụkarị ụlọ ọrụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ngalaba ndị ọbịa na-arụ ọrụ site na ọrụ ndị enyere site na hotels dị ka ebe obibi na ọrụ nri, njem, njegharị na ihe omume [njem, okike, ntụrụndụ na ọdịbendị] bụ ntọala nke mmemme njem. Ọchịchọ maka ndị ọrụ a zụrụ azụ ma nwee nkà iji nye ọrụ dị mma na ụlọ ọrụ ahụ bụ isi na isi iwu nke Institutelọ Ọrụ. Nke a bụ ihe ụlọ ọrụ ahụ nọ na ya; inye ọzụzụ na ọkwa niile na cadres maka ịrụ ọrụ na njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọzụzụ na ụgwọ NIHOTOUR
Mgbe m ruru n'ọfịs, achọpụtara m nkwado iwu dị mkpa maka NIHOTOUR iji mezuo iwu nke iwu na enweghị ihe ọ bụla. Ekele maka nkwado na nkwado nke 8th National Assembly bụ ndị tinyere igwe dị mkpa iji mezuo nrọ nke tolọ Ọrụ iji nweta ụgwọ nke na-akwado ọrụ ya n'okpuru usoro iwu. Ebumnuche na mgbalị a na-enye m ọ joyụ dịka ọ dị afọ 30 na-eme ma ana m atụ anya mmezu ya n'oge na-adịghị anya.
Enwere m ezigbo mmasị ma nwee mmasị na ọzụzụ n'ihi na ọ bụ isi nkuku na ikike ịkwanye maka uto na nkwado nke ụlọ ọrụ ọ bụla mana karịa maka Hospitallọ Ọbịa na njem nleta nke bụ isi ọrụ na-achịkwa na isi mmadụ. Njem nlegharị anya bụ ọrụ nnwale na ndị ahịa na-agakarị n'ụlọ na-echeta naanị ọrụ ọma ma ọ bụ nke ọjọọ enyere na usoro a. Nke a bụ ya mere ogo ọrụ enyere dị oke mkpa maka ọganiihu na mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ. Naanị ezigbo ọzụzụ na-eme ka ị nweta ọrụ dị mma, n'ihi na ndị ọrụ na-agba ọsọ ma na-akwado ndị mmadụ. Ya mere iji nyefee ọrụ dị mma, ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ ga-azụrịrị nke ọma na nka dị mkpa nke ga-enyere ha aka ịnye ọmarịcha ọrụ gafee mpaghara dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke a bụ ebe ọrụ dị mkpa nke NIHOTOUR na-abata na ihe kpatara m ji mesie ike mgbe niile mkpa maka ọzụzụ na ọzụzụ ọzọ [Ọganihu ọkachamara na-aga n'ihu CPD] nke ndị ọrụ na-agba ọsọ ma na-elekọta ngalaba ahụ.
Akụrụngwa na NIHOTOUR ogige
NIHOTOUR nwere ụlọ ọrụ itoolu na-agbasa na mpaghara mpaghara mpaghara isii nke mba ahụ. Inye akụrụngwa nke ogige ahụ adịghị mfe mana ọ na-aga n'ihu. Na mkpokọta, m ga-asị na anyị emeela ọtụtụ ihe nwere ike iji hụ na enyere ndị akụrụngwa dị mkpa maka ogige ka ha rụọ ọrụ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma. Agbanyeghị, Institutelọ Ọrụ ahụ na-elele nkwado, mmekọrịta na mmekorita sitere na ndị njem na-ahụ maka njem nleta na ndị gọọmentị na-ahụ maka mmepe ikike nke njem nleta na steeti ha
Anyị nwere ụlọ ọrụ njem nleta na ile ọbịa nke gbasara na steeti niile nke gọọmentị chọrọ ndị ọrụ ruru eru. Ọ dị mkpa ka ewere ọzụzụ dị nso karịa ndị mmadụ iji belata ohere ịnweta ohere ọzụzụ dịnụ na ọnụ ọnụ ọnụ maka ndị a na-azụ. Ya mere, imalite na mkpa akụrụngwa nke ogige ndị dị ugbu a na imeghe ogige ndị ọzọ na steeti ndị ọzọ na-achọsi ike.
Nke a bụ ebe m ga-arịọ maka mmekorita ya na ụlọ ọrụ ndị ahaziri ahazi yana gọọmentị steeti ka ha sonye ma rụkọtakwuo ọrụ na Institute iji meziwanye akụrụngwa na ogige ndị dị ugbu a [na nke mbụ] iji nwee ike igbo mkpa dị ukwuu nke ndị ọrụ a zụrụ azụ na ụlọ ọrụ ahụ. Gọọmentị etiti na-eme ọtụtụ ihe ugbua, mana yana mgbakwunye na mmekorita na mmekorita site n'aka ndị ọrụ nzuzo na nkwado nke gọọmentị steeti, Institutelọ Ọrụ ahụ nwere ike ime karịa karịa gbasara ọzụzụ ndị ọrụ na ịzụlite ikike maka ụlọ ọrụ ahụ.
Ugbu a, anyị nwere ụfọdụ mmekọrịta na mmekorita na isoro ndị ọrụ gọọmentị na ndị gọọmentị ahaziri ahazi, ụfọdụ n’ime ha bụ; Benue State Government [campus], Osun State Government [campus], Kano State University for Science and Technology [KUST] [nkwonkwo na-agba ọsọ nke Daula Hotel Kano dị ka ụlọ ọzụzụ na-enye ọzụzụ], Consolidated Alliance [E-Training, E-Training Centers, E-Azụmaahịa na SmartJobs Creation], JETRO Tours International NIHOTOUR-JETRO Tourism Clubs maka ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ndị ntorobịa iji kpalite ọchịchọ maka ile ọbịa na njem nlegharị anya na nwata mgbe ha na-azụ ha mkpa ọ dị ịkwagide gburugburu anyị na ọdịbendị, n'etiti ndị ọzọ.
Anyị na ndị mmekọ nwere imekọrịta mmekọrịta maka mmemme mmemme maka ndị mmụta anyị. Akwụkwọ 'Ngosipụta Mmasị' dị ugbu a n'ịntanetị www.nihotour.gov.ng pịa njikọ SMARTJOBS wee pịa Ngosipụta nke Mmasị ịza oku anyị maka ndị mmemme mmemme ụwa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe omuma nke Mmemme NIHOTOUR
Ọzụzụ anyị na-eme ka o doo anya na ogo ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ụkpụrụ dị elu ma nwee ike ịnye ndị ahịa ha ọrụ dị elu n'ụzọ nwere atụ na nke tozuru oke na usoro kachasị mma n'ụwa. Maka iji nweta ọrụ ka mma na ụlọ ọrụ ahụ, ọzụzụ bụ isi ma dị ezigbo mkpa. Nkà na ọzụzụ a kapịrị ọnụ ndị ọrụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ile ọbịa bụ ndị ga-enyere ha aka ịrụ ọrụ ma rụọ ọrụ ha n'ụzọ kachasị mma maka afọ ojuju nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọbịa na nkwado nke gburugburu ebe obibi.
Okpụrụ Nlekọta Ọrụ nke Mba (NOS) nke Ngalaba Nkà Mmụta Ntọala (NIHOTOUR na-arụ na kansụl na nnọchite mpaghara ahụ na ndị otu sitere na ndị dị iche iche na mpaghara ahụ) na-esetịpụrụ ụkpụrụ usoro mmụta na usoro ọkachamara kachasị mkpa kwa oge, nke na-aza mkpa nke cadres dị iche iche na ọkwa dị na mmemme ile ọbịa, njem na njem nleta. Naturedị ọzụzụ nke NIHOTOUR na-enye bụ njikọta nke klaasị, ICT na ọzụzụ aka, nke dabara na Usoro Ọzụzụ Nkuzi Mba.
Ọ bụghị naanị ọzụzụ usoro agụmakwụkwọ, mana ọzụzụ n'ezie na ọrụ iji mee ka ihe a mụtara na klaasị na ntanetị pụta. Ọ bụ mpaghara dị oke mkpa nke ọzụzụ nke Nigeria chọrọ ịmalite mpaghara ahụ ka ọ dịkwuo irè ma dị irè nke mere na anyị na-akpọ maka mmekọrịta na ndị nwe ụlọ nkwari akụ na ndị ọrụ nlegharị anya.
Studentsmụ akwụkwọ niile gafere usoro mmemme ile ọbịa nke Institute nwere ikike ndị a wee pụọ n'ọhịa na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ọbịa dị iche iche na mba ahụ.
Mgbakwunye na nzere ntozu nke usoro NIHOTOUR na Mmemme
Ọzụzụ n'ụlọ ọrụ ndị njem dịka UNWTO guzobere nwere ụkpụrụ nke ịmakọ nka enyere n'oge usoro agụmakwụkwọ na atụmanya na mkpa nke mkpa. Ejiri ụkpụrụ NBTE kwadoro ma kwadoro NOSTE dabere na mkpa ụlọ ọrụ ahụ ma tinye ya na National Skills Qualification Frameworks [NSQF].
Ọhụụ nke Okpụrụ Nlekọta Ọrụ na National Skills Qualification Framework NSQF bụ ihe zuru ụwa ọnụ na ihe na-adịbeghị anya na Nigeria na n'ikpeazụ ihe mgbaru ọsọ bụ ịmepụta ndị ọrụ na-eweta ọkwa dị mma ma nwee ike ịsọ mpi na ohere ụwa.
Ebumnuche Asambodo National Skills Qualification Framework [NSQF] bu iji me ka ọdịiche ahụ dị ma kwusi na sistemụ ya na ikike ọrụ ebe ọrụ yana akaebe nke ihe akaebe.
Usoro ihe omume a ga-emekwa nyocha nke ọma oge niile nke ga - enyere aka idozi aber dị ugbu a yana ịdebe ọdịnaya nke mmemme nkuzi mgbe niile.
NIHOTOUR ka enyere asambodo dịka Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ tozuru etozu maka usoro nka mmụta mba niile [NSQ] ma zụọ ndị ọrụ ka ha bụrụ ndị nyocha, ndị nyocha nke ime na ndị na-ahụ maka mpụga iji nyere NIHOTOUR aka ịmịpụta nke ọma na iwulite ikike maka ngalaba ahụ.
Iwu anyị nyere anyị ike ịnye ọzụzụ na asambodo asambodo na diplọma nye ndị ọrụ ngalaba ahụ, mee nyocha ma wulite ikike niile. Anyị na-enyekwa ndị nkuzi anyị ọzụzụ maka mmemme maka mmekọrịta anyị na ndị ọzọ.
Mahadum Kano nke Sayensị na Nkà na ,zụ, Utali College dị na Kenya, oftù Na-ahụ Maka Ndị Na-ahụ Maka Azụmaahịa, Organizationtù Ọzụzụ Mba nke dị na United Kingdom, bụ ụfọdụ ndị mmekọ anyị.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ akwụkwọ ahụ ejirila afọ anọ gara aga raara onwe ha nye iji mezue ọrụ ndị a dị oke mkpa maka ịhazi ụlọ ọrụ niile chọrọ mana ha na-efu kemgbe ọtụtụ afọ.
Billgwọ ụlọ akwụkwọ ahụ gafere ụlọ abụọ na nso nso a wee chere nkwenye nke Onye isi ala, na-arụ ọrụ na nchekwa Nationstù Mmepe Mmepe nke Mba Ndị Dị n'Otu [UNIDO] enyemaka oru aka; gaa n'ihu na-eme ka mmekọrịta ya na International Air Transport Association [IATA] ọzụzụ, ịchekwa Ngalaba Nkà Mmụta Ọzụzụ maka Ọbịa Nleta na Nleta Ndị njem na Nigeria na ịmecha mkparịta ụka Lagos campus bụ Mmemme Mmepe nke United Nations [UNDP] Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ Ọrụ [VTC].
Ọrụ ndị ọzọ dị nso na ngwụcha bụ, Camplọ ọrụ gọọmentị nke Enugu Campus nke ụlọ akwụkwọ ahụ, nkuzi na usoro nyocha, ntinye nke ProjectSmartJobs na mmekorita ya na Consolidated Alliance yana ọzụzụ na ọzụzụ ICT na ime ka ndị mmadụ nwee ike ịkwado onwe ha site n'aka ndị na-etinye ego na-enye ego n'elu ikpo okwu; mechie ndokwa maka ụlọ akwụkwọ nke abụọ nke nzukọ ezubere maka 25th August, wusie ụlọ akwụkwọ ahụ ike ma mechaa nweta nzere maka ọkwa 4-6 nke National Standards Standards [NOS].
Ihe ndị dị n'elu nwere ike bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka enwetara ya n'ihi ebumnuche na ịdị mma dị mkpa nke njikwa ụlọ ọrụ ugbu a nke onye isi nchịkwa isi ugbu a na-eduzi.
Ka ọ na-agbadata oge izizi ya n'ime izu ndị na - abịanụ, iji nlezianya lee anya na arụmọrụ ya n'ime afọ anọ gara aga na-egosi arụmọrụ dị afọ ojuju na maka ịga n'ihu ọ bụrụ na ọ bụghị maka ihe ọ bụla, iwu ọhụrụ iji kpalite uwe ojii nke NIHOTOUR maka afọ anọ ọzọ. agaghi ewe iwe chi ndi njem na Nigeria.